1. Mpivarotra na mpanamboatra ve ianao?
Manana orinasa manokana ao Yuyao izahay ary manao ny varotra mifototra amin'izany.
2. Rahoviana aho no afaka mahazo ny vidiny?
Matetika izahay dia mitanisa ao anatin'ny 2 ora aorian'ny nahazoanay ny fanontanianao. Raha tena maika ny hahazo vidiny ianao dia antsoy izahay na lazao aminay amin'ny mailakao mba hijerenay ny laharam-pahamehanao.
3. Ahoana no ahafahako maka santionany hanamarinana ny kalitaonao?
ho an'ny fanondroana kalitao, afaka manome santionany maimaim-poana izahay.
4. Tsara kalitao ve ny vokatrao? Ahoana no ahafahako matoky anao?
Eny. mpanamboatra matihanina any Shina izahay, manana traikefa 13 taona amin'ny famokarana sprayer. ary nahazo laza tsara ny vokatray. Raha izao no fotoana voalohany hifandraisanao aminay dia matokia anay fa tsy hanadino anao izahay.
5. Hafiriana no azoko antenaina hahazo ny santionany?
Rehefa avy nandoa ny saram-pitaterana entana ianao ary mandefa anay antontan-taratasy voamarina, ny santionany dia ho vonona ny fandefasana ao anatin'ny 7-15 andro. Ny santionany dia halefa any aminao amin'ny alàlan'ny express ary tonga ao anatin'ny herinandro. Azonao atao ny mampiasa ny kaontinao express na mandoa mialoha anay raha tsy manana kaonty ianao.
6. Afaka misafidy ny loko ve aho?
Eny, afaka misafidy ny loko tianao ianao.
7. Inona ny fotoana fanaterana?
20-25 andro aorian'ny fandoavam-bola.
8. Afaka mitsidika ny orinasanao ve aho?
Mazava ho azy. Tongasoa amin'ny fotoana rehetra.
9. Mbola manana olana?
Alefaso mailaka izahay ary hiezaka izahay hanampy.